China Cantilever Climbing Formwork ifektri nabaphakeli |I-Lianggong
I-cantilever climbing formwork, i-CB-180 kanye ne-CB-240, isetshenziselwa ikakhulukazi ukuthela ukhonkolo endaweni enkulu, njengamadamu, izinsimbi, amahange, izindonga ezibambayo, imigudu nezindlu zangaphansi.Ukucindezela kwe-lateral kokhonkolo kuthathwe amahange kanye nezinduku zokubopha odongeni, ukuze kungabikho okunye ukuqinisa okudingekayo ku-formwork.Ibonakala ngokusebenza kwayo okulula nokusheshayo, ukulungiswa kwebanga elibanzi lokuphakama kokusakazwa okukodwa, indawo kakhonkolo ebushelelezi, nomnotho nokuqina.
I-cantilever formwork CB-240 inamayunithi okuphakamisa ezinhlobo ezimbili: uhlobo lwe-diagonal brace kanye nohlobo lwe-truss.Uhlobo lwe-truss lufaneleka kakhulu kumakesi anomthwalo wokwakha osindayo, ukumiswa kwe-formwork ephakeme kanye nobubanzi obuncane bokuthambekela.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-CB-180 ne-CB-240 yibakaki abakhulu.Ububanzi bepulatifomu enkulu yalezi zinhlelo ezimbili buyi-180 cm no-240 cm ngokulandelanayo.
● Ihange elinomnotho neliphephile
Ama-cone e-M30/D20 aklanyelwe ikakhulukazi ukhonkolo oluhlangothini olulodwa kusetshenziswa i-CB180 ekwakhiweni kwedamu, kanye nokuvumela ukudluliswa kwamandla anamandla okugunda kanye nokugunda kukhonkolo osamusha, ongaqinisiwe.Ngaphandle kwama-tie-rods, ukhonkolo ophelile uphelele.
● Iqinile futhi iyonga kakhulu emithwalweni ephezulu
izikhala zabakaki ezivulekile zivumela amayunithi esakhiwo sendawo enkulu anokusetshenziswa okuphelele komthamo wokuthwala.Lokhu kuholela ezisombululweni ezonga kakhulu.
● Ukuhlela okulula nokuvumelana nezimo
Nge-CB180 yokukhuphuka kohlangothi olulodwa lwefomu, izakhiwo eziyindilinga zingabuye zenziwe ikhonkrithi ngaphandle kokwenza noma iyiphi inqubo enkulu yokuhlela.Ngisho nokusetshenziswa ezindongeni ezithambekele kungenzeka ngaphandle kwanoma yiziphi izinyathelo ezikhethekile ngoba imithwalo eyengeziwe kakhonkolo noma amandla okuphakamisa angadluliselwa ngokuphephile esakhiweni.
● Umthamo wokuthwala ophezulu
Umthamo omkhulu wokulayisha wabakaki uvumela amayunithi esikafula esikhulu kakhulu.Lokhu konga amaphoyinti ehange ezinombolo adingekayo kanye nokunciphisa izikhathi zokugibela.
● Inqubo elula yokuhamba nge-crane
Ngoxhumo oluqinile lwe-formwork kanye nesikafula esikhuphukayo, zombili zinganyakaziswa njengeyunithi yokugibela eyodwa ngokhreni.Kanjalo ukonga isikhathi okubalulekile kungafinyelelwa.
● Inqubo eshaya ngokushesha ngaphandle kwe-cran
Ngesethi ehlehlisayo, izakhi ezinkulu ze-formwork zingahlehliswa ngokushesha kanye nomzamo omncane.
● Iphephile ngenkundla yomsebenzi
Amapulatifomu ahlangene aqinile nabakaki futhi azokhuphuka ndawonye, ​​ngaphandle kwesikafula kodwa angasebenza ngokuphepha naphezu kwendawo yakho ephakeme.
Okwedlule: Ngokwezifiso Steel Formwork
Olandelayo: Isikrini Sokuvikela kanye Nenkundla Yokuthulula